Etu esi wụnye ndọtị Chrome na Firefox | Akụkọ akụrụngwa
Mwepụta nke Firefox Quantum, nke kachasị ọhụrụ nke Mozilla Foundation na-enye ugbu a nke ihe nchọgharị Firefox, pụtara nnukwu mmụba ọ bụghị naanị na arụmọrụ nke ihe nchọgharị ahụ, nke dị ugbu a karịa ngwa ngwa, kamakwa yana ndọtị nke ndọtị, ndọtị ndị dabara ugbu a na ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Ma otu ụzọ mgbati ahụ si arụ ọrụ pụtara na ụfọdụ ndọtị ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ. Ọ dabara na anyị nwere ike iji ndọtị anyị nwere ike ịchọta ugbu a na Chrome, ụdị nke ụdị ọ bụla na-enye anyị ohere ịme ihe ọ bụla batara anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ohere ọ bụla nke ndọtị dị na Chrome, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu esi eji mgbakwunye Chrome na Firefox.
Kemgbe mmalite nke Firefox Quantum, mgbe ị na-emepe ndọtị anyị ga-eji WebExtensions, sistemụ na-enye ohere ịgbatị edepụtara maka Chrome na Opera ka emee ya na obere mgbanwe na nchọgharị Firefox nke Mozilla Foundation. Ọ dabara nke ọma usoro ntughari dị mfe ma chọọ obere ihe ọmụma.
Nke mbu, anyi aghaghi debanye aha dị ka onye nrụpụta na weebụsaịtị Mozilla Foundation, ka anyị wee nwee ohere bulite ndọtị na ụlọ ahịa gị. Ọ bụrụ na anyị emeghị usoro a, mgbe ndọtị ahụ malitere ịrụ ọrụ, ọ ga-akwụsị ma ọ bụrụ na anyị abanyeghị na data akaụntụ anyị.
Wụnye Chrome na Opera na-agbakwunye na Firefox
Nke mbụ, anyị ga-etinye mgbakwunye na Firefox Storelọ ahịa Chrome Foxified. Mgbatị a ga - enyere anyị aka ịtinye ihe mgbati ọ bụla dị maka nchọgharị Google na Opera. Mgbatị a ọ bụ kpam kpam free ma na-akwado onyinye site na PayPal.
Ọzọ anyị ga-aga na Chromelọ Ahịa Web Chrome ma họrọ ndọtị anyị chọrọ ịwụnye. Maka ihe atụ a anyị ga-eji ụlọ ahịa ndọtị Chrome kama Opera, naanị n'ihi na ọ bụ ihe nchọgharị kachasị n'ọtụtụ ebe.
Ozugbo anyị nọ na ndọtị anyị chọrọ ịwụnye, ma ọ bụrụ na nrụnye nke Storelọ Ahịa Chrome echekwara Foxified ziri ezi, bọtịnụ ADD TO FIREFOX kwesịrị ịpụta na ihe nchọgharị ahụ. N'oge ahụ, a ga-ebido ndọtị ụlọ ahịa Chrome Store Foxified na cỌ ga-agbanwe mgbakwunye ndọtị nke Chrome ka ọ daba na ihe nchọgharị Firefox.
Usoro a na-ewe nkeji ole na ole, ebe a ga-ebugharịrị ntụgharị ahụ na sava Firefox ma chere maka nyocha na ntinye aka. Ozugbo emechara usoro a, anyị ga-enweta ozi-e na akaụntụ ahụ anyị nweburu Debanye aha dị ka ndị mmepe maka Firefox.
Aka nri, a ga-ajụ anyị maka ikike dị iche iche nke ngwa ahụ chọrọ iji rụọ ọrụ, n'otu ụzọ ahụ na-eme mgbe anyị nwara wụnye ndọtị dị na ụlọ ahịa mgbakwunye Firefox.
Ozugbo arụnyere mgbatị ahụ wee gbanwee nke ọma, a ga-egosipụta akara ngosi nke otu ihe ahụ na mmanya elu nke ihe nchọgharị ahụ, Ebe Firefox na-egosi anyị ndọtị niile arụnyere. Site na oge a gaa n'ihu, anyị nwere ike iji ndọtị dị ka a ga - asị na anyị na - eme ya kpọmkwem site na ihe nchọgharị Google Chrome.
Usoro a na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ oge mbụ, anyị nwere ike ịnwale ọzọ oge nke abụọ, ka ọ bụrụ na ihe adaala n'oge usoro ahụ, ihe na-abụghị nke mbụ, mana nke ahụ nwere ike ịme. Tupu m mepụta edemede a, anọ m na-agbanwe ndọtị dị iche iche nke dị mwute ikwu na adịghị na nchekwa Firefox ma ha niile arụ ọrụ, ma ọ ka na-arụ ọrụ zuru oke n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji usoro a oge niile iji tọghata mgbakwunye gị kachasị na Chrome na Firefox, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche kwado oru ngo a site na inye onyinye ego site na akaụntụ PayPal na onye nrụpụta na-enye anyị ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi wụnye ndọtị Chrome na Firefox
Cyberdyne ugbu a nwere ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ iji zụọ exoskeleton nke uche ya
Netflix ga - emeziwanye njikwa ndị nne na nna nke ọdịnaya ya